Ihe mkpuchi mkpuchi | Ihe nyocha ndị na-ese ihe | Ampp
Mba: F-32, 1st Floor, 2nd Avenue, Anna Nagar East, Chennai
ONLINE Coatings Portal bụ na ọzụzụ dị ike ma mara nke ọma na asambodo maka mkpuchi ndị nyocha na eserese ndị na-ese ihe bụ akụkụ nke mkpuchi HTS. Ọ na-emekọ maka mkpuchi mkpuchi ụlọ ọrụ metụtara ọgwụgwọ, Ihe mkpuchi, Nnyocha ihe osise, na usoro nyocha
Ejiri ndị ọkachamara na ndị ọkachamara na-ahụ maka mkpuchi ọrụ na ndị ọkachamara. Na mkpuchi ọkachamara nzụlite sitere na Mmanụ, Gas, Petrochemical, Mmiri, hipgbọ mmiri, Industlọ Ọrụ Ndị Ahịa. Ọtụtụ ụmụ akwụkwọ na-arụ ọrụ na Onshore, Offshore, Pipeline, Process Industries ritere uru na mmemme E-mmụta a. N'oge na-adịghị anya, anyị kpebiri iwebata ọtụtụ ihe ọmụmụ metụtara ọrụ ndị ọzọ dị ka ịgbado ọkụ, mkpuchi, mkpuchi ọkụ, ọkụ ọkụ na-ekpo ọkụ, ịgba ọkụ ọkụ, nyocha na njikwa, wdg.
Ihe mkpuchi nyocha nke nyocha
Mgbe emechara usoro ịntanetị, onye mmụta nwere ike ịrụ ọrụ dị ka ndị a: -
Onye na-enyocha mkpuchi
Onye na-ahụ maka Anticorrosion
Injin njikwa Corrosion
Onye nyocha QC / QA
Ọkachamara mkpuchi mkpuchi
Eserese Eserese Eserese Emezi
Uru nke Ọzụzụ Ntanetị n'ịntanetị
Ejiri uru ndị a metụtara ọzụzụ ọzụzụ ndị nyocha na ntanetị
E-mmụta / Ọnọdụ ntanetị na-eme ka nnweta nnweta 24 X 7 & 365 nke onye so na ya. Ha nwere ike iji ọzụzụ a dị n'ịntanetị na-arụ ọrụ / ụlọ / oge ezumike / ezumike na nnweta dị mfe.
Ọnọdụ ntanetị na-ebelata visa / ụgbọ elu / ịbanye na ebe obibi ma ọ bụrụ na e jiri ya tụnyere ọnọdụ Onsite. Ọzọkwa, enweghị ike ịnọnyere ọrụ gị yana ọnwụ ịkwụ ụgwọ ga-esochi ya.
You'll ga-agagharị ihe nkiri / mkparịta ụka / nkata ndụ / vidiyo ndụ / Ajụjụ / ọrụ na-agụghị akwụkwọ agụ ma ọ bụ mmecha. You'll ga-amali / njedebe / tụgharịa / weghachite usoro ọ bụla n'oge ọ bụla na enweghị mmachi
ll N'ezie slide / ọdịnaya nakweere na ihe ngosi iji ịgbatị amụrụ ebe nchekwa. A ga-echeta nke ahụ n'oge usoro agụmakwụkwọ niile dị n'ịntanetị.
Ihe ọmụmụ anyị niile na-ebu ọrụ dị mkpa na nyocha iji mee ka mmụta mmụta ka mma. Oge nyocha ga-enyere ụmụ akwụkwọ aka ihichapụ usoro mmecha ikpeazụ.
Usoro ọzụzụ anyị dị n'ịntanetị kwekọrọ na usoro ọmụmụ nke International Inspector. Ihe omuma anyi banyere ntaneti nke Intanet ga-aba uru iji kpochapụ ule asambodo International.
Cogwọ Course dị ala
Kemgbe 2014, ụkpụrụ HTS COATING bụ iji nyefee agụmakwụkwọ dị mma na nyocha mkpuchi Ọrụ na ngalaba Ngwa. Yabụ ụgwọ nkuzi na ule na-asọmpi na nke kachasị dị ala ma e jiri ya tụnyere ndị na-enye ọzụzụ ọzụzụ.
Ndị ọkachamara HTS COATINGS bụ ndị ọsụ ụzọ na ngalaba mkpuchi Ngwaọrụ na ngalaba nyocha. Yabụ, usoro ọmụmụ na ọdịnaya anyị niile na-eweta ụdị nke teknụzụ mkpuchi ugbu a na nke ugbu a.
Ihe Ntanetị Ntanetị na HTS COATINGS
Ọtụtụ ụmụ akwụkwọ achọtara afọ ojuju nke oge dị mkpirikpi mgbe ha na-aga nkuzi nkuzi International Inspector Training. Ndị na-enye asambodo mba ụwa dịka FROSIO / SSPC / NACE / BGAS / ICORR na-enye ọkwa ọkwa dị iche iche. N'ihi oge dị mkpirikpi nke ọmụmụ International ahụ, Studentsmụ akwụkwọ chọrọ klas ndị ọzọ na-akwadebe. Yabụ, ha na-achọ ọzụzụ na asambodo ọ bụla. (Nchọpụta mkpuchi mkpuchi / Frosio mkpuchi mkpuchi / SSPC onye nyocha / Frosio Asambodo / Ihe nyocha nyocha)
Iji merie ọzụzụ dị mkpirikpi, Ntanetị Ntanetị mere webụsaịtị a maka usoro mmemme dị iche iche nke ọma HTS COATINGS. Nke a E-mmụta ikpo okwu jiri nlezianya hazie isiakwụkwọ ọ bụla maka nghọta nwata akwụkwọ banyere teknụzụ mkpuchi mkpuchi. Ugbu a, anyị etinyegoro mmemme mmemme SSPC na FROSIO metụtara. N'oge na-adịghị anya, anyị ga-agbakwunye mmemme ndị ọzọ kwekọrọ na nhọrọ nwata akwụkwọ.
ANY CO ATKPLINETARA NA HTS, na-achọ ụmụ akwụkwọ anyị niile ka ha nwee ọganihu na ọrụ na mmanụ, mmanụ, mmanụ na ụlọ ọrụ dị egwu.
ANYANWU INWE NIILE
Ndị na-eso ụzọ mba ọzọ
AKWASKWỌ KWES COMR.
ND TEMỌD KWESR.
Ndị na-enyocha mkpuchi: Asambodo akụ na ụba ụwa na enweghị ọrụ n'ụwa a enweghị atụ maka ọtụtụ ebumnuche na ebumnuche. Na mgbakwunye, COVID 19 na-adịbeghị anya
20 / 07 / 2020 Enweghị asịsa
14 / 07 / 2020 Enweghị asịsa
Ndị Ọrụ ISO / SSPC Worldkpụrụ Niile Zuru .wa Ọnụ
Copyright © 2021 Ihe ntanetị | Kwadoro site na Astra WordPress Okwu